होमपेज / शुक्रबार / 'मौन' नम्रता
'मौन' नम्रता	20 Jun 2013 बिहीबार ६ असार, २०७०
मन लागेका कुरा चाहेर पनि अभिव्यक्त गर्न नसक्नु कति पीडादायी हुन्छ होला? त्यसमाथि प्रेमका कुरा गर्नु त झन् कठिन! त्यसको अनुभव बटुलेकी छिन्, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले। चुपचाप सुटिङ सकाएको फिल्म 'मौन'बारे पहिलोपल्ट शुक्रवार मुख खोलेकी छिन्। बोल्न नसक्ने विद्यार्थीहरूस“ग सत्ताइसौँ जन्मदिवस मनाउँदै 'मौन' बारे जानकारी दिएकी छिन््। नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयमा जन्मदिवस मनाइरहँदा उनले अर्काे कुरा खोलिन्। त्यो थियो उनी त्यही विद्यालयको छात्रा भएको कुरा! फिल्मका लागि उनले सांकेतिक भाषा त्यहीँ सिकेकी रहिछन्। विद्यार्थीलाई स्टेसनरी पनि बाँडेकी उनले 'फिल्मको कथावस्तु पनि सुन्न र बोल्न नसक्नेहरूको प्रेममा आधारित' रहेको बताइन्। 'मौन'लाई सुरज भुसालले निर्देशन गरेका हुन्। Tweet Leaveacomment Message *
खुल्लमखुल्ला चुम्बनपर्दामा चुम्बनका दृश्य नेपाली दर्शकले पचाइसके पनि समाजमा खुल्लमखुल्ला यसको अभ्यास त्यतिसाह्रो भइसकेको छैन। अभिनेता आर्यन सिग्देलले होलीको दिन खुल्लमखुल्ला चुम्बन गरे, श्रीमती सपना भण्डारीलाई। घरको आँगनमा श्रीमतीलाई 'टङ किस'...	'उ'मय देश (वक्रासन)करिब तीन वर्षअघि सुशील कोइरालालाई पहिलोपटक भेटेको थिएँ मैले। कांग्रेसका नेविसंघलगायत भ्रातृ संगठनहरूमाथि विघटनको तरबार चलाएर उनी विजयी मुद्रामा बूढो लोकतान्त्रिक हाँसो हाँसिरहेका थिए। पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको बूढो लोकतान्त्रिक हाँसो!...	चार सय फिट उचाइमा स्टन्टअमेरिकी राज्य युटाहका २८ वर्षीय एन्डी लेविसलाई 'असली स्पाइडर म्यान' भन्ने धेरै छन्। केही साताअघि उनले साथीहरूसँग मिलेर चार सय फिट उचाइमा एउटा पातलो डोरीमा टेकेर अनेक स्टन्ट गरेपछि उनलाई...	काली दमिनीदेखि रूपासम्मललितपुरको झम्सिखेलस्थित मोक्ष रेस्टुरेन्टमा सोमवार दिया मास्के आँखामा कालो चस्मा, बुट्टेदार सर्ट्स र कालो पारदर्शी लेगिंग्समा प्रकट भइन्। 'म काली दमिनीलाई भेट्न आएको!' उनको गेटअप हेरेर ठट्यौलो शैलीमा मैले भनेँ।...	रमझममा कटौतीअघिल्ला वर्षका तीजमा महिलाहरूले 'अचाक्ली' गरे। महिनादिनअघि पार्टी प्यालेस र होटलमा दर खाने कार्यक्रम गरे। दरमा दारु मिसाए। सारी र गरगहनाहरूको उधुम प्रदर्शन गरे। तीज मनाउन ऋण पनि काढे। तर,...	'कलाकारले घमण्ड गर्ने आधार के ?'रंगमञ्च हुँदै फिल्ममा आइपुगेका हुन्, सुवास थापा। 'अग्निको कथा', 'कोर्ट मार्सल'जस्ता नाटकमा उम्दा अभिनय गरेका सुवासले 'कोही मेरो', 'भिजिलान्ते', 'फेसबुक', 'बिर्खेलाई चिन्छस् ?' जस्ता फिल्ममा पनि तारिफयोग्य काम गरेका छन्।...	लागत विवादवैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने खर्चका विषयमा सरकारले लागत तोकेको छ। तर, त्यो लागतअनुसार म्यानपावरले रकम लिँदैनन्। लागत चर्को असुल्छन्। म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, 'लागत समयसापेक्ष छैन।' तर, सरकारले...	जहाँ जिन्दगी ठप्प छबच्चा बोकेर मोटरसाइकलमा स्कुल पुर्‍याउन हिँडेका विराटनगर–६ का अनिश खतिवडालाई पेट्रोलले तनाव दिइरहेको छ। बन्दले स्कुल बस नचल्दा बच्चालाई एकाबिहानै मोटरसाइकलमा पुर्यारउनु उनको दैनिकी भएको छ।	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...